Jaarmayaan gargaarsa daa’immanii UNICEF Kan torban sadaffaa abatii jiru walitti bu’iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameen ijoollee irra dhiibbaan akka hin geenye kanneen walitti bu’iinsa kana keessa jiran yaadachisee jira.
Uummata Maqalee keess jiraatu kuma 500,000 keessaa walakkaan isaanii ijoollee dha. Gareeleen amaan walitti bu’iinsa kana hammeessuun lubbuu namaa balaa irra kan buusu ta’uu akeekkachise.
Gareeleen walitti bu’iiinsa kana keessa jiran lola jiru dhaabanii furmaata karaa nagaa akka barbaadan waamicha dabarsina jedhe UNICEF. Dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaan irra ga’e akka dhaqqabaniif daandiin akka saaqamuuf gaafatee jira.
Hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hanga amma Maqalee fi naannoo Tigraay keessa jiran ilaalchisee yaaddoo qabna jechuu dhaan gareeleen martinuu kanneen walitti bu’iinsa kana keessatti hirmaatan eegumsa barbaachisu akka godhan gaafatee jira.